musha / Interior design / Embroidery, Maruva Uye Shiri, Chinese Kupenda, Hazy Jiangnan Flavor︱NoneZone Dhizaini
2021 / 06 / 20 kupatsanuraInterior design 6129 0
Iyo Ding Sheng Tang yekudyira mune ino kesi iri mune chivakwa cheRepublican muHe Alley, Nan Chang Street, Wuxi, inova chivakwa chekuchengetedza nhoroondo, saka iyo facade, colonnade, njanji uye zvinhu zvakaita semafafitera maruva uye zvakavezwa zvidhinha zvinofanirwa kuve kuchengetedzwa. Uye zvakare, iyoresitorendi iri mune yekare nharaunda yakaita seQingming Bridge, ine yakasimba nhoroondo uye tsika ruvara rwakakomberedza. Naizvozvo, mugadziri akatevera ruvara rwakasviba rwepakutanga nzvimbo, akatora "husy" semweya, akabatanidza echinyakare Jiangnan dhizaini yekugadzira neyekugadzira dhizaini yazvino, uye akashandisa nzira dzakasiyana siyana dzehunyanzvi senge chaicho uye chaicho, mwenje nemumvuri, kufamba uye kunofambira mberi kugadzira poetic poetic space ine "a hazy Jiangnan meaning". Iyo nzvimbo inoyevedza uye nhetembo.
Rwizi rwakasvibira sebhuruu muchirimo, hatikwanise kurangarira Jiangnan?
Iyo yekudyira yakamisikidzwa sechiridzwa chemhando yepamusoro uye yepamusoro yeSuzhou-dhizaina cuisine, iine chikamu chikuru chemakamuri epachivande. Naizvozvo, dhizaini akafunga nzvimbo yemukati mechivakwa uye akashandisa veneer yakasviba kuti ikwane ruvara rwekutanga rwenzvimbo. Akagadzira imba yekutanga yekumberi diki munzvimbo isina kujairika izere nekunhuhwirira kwakanaka kweJiangnan, achiisa matauriro nehunhu hwenzvimbo yese uye ichiita mutambo wekutanga wekuona wevatengi.
Hazy inogona kuita kuti kusakwana kuve kwakakwana uye kugumira mukusingaperi.
Munzvimbo yekumberi yekutandarira, Su Yang anoshandisa chinhu chesimbi keteni. Hosi yeketeni inosvibisa iyo yepanyama nzvimbo, inotyora pfungwa yemuganho, uye inowedzera inowoneka uye yekufungidzira yekufungidzira nzvimbo. Vatengi vanogona kuwana nekukoshesa micheka iri pamadziro, iyo yekare paini yakanangana nemadziro uye zvimwe zvekushongedza kuburikidza nemupendero wemambure, nekudaro vachisangana neinonakidza uye nhetembo nhetembo.
Zvichakadaro, dhizaini akaisa magirazi ezvinhu munzvimbo. Kubudikidza nekuratidzira uye kubvongodza kwegirazi, inowedzera pfungwa yedaro uye inodzamisa pfungwa yeicho chaicho uye kunyepedzera, kuwana nzvimbo inotangira uye inopfuura zvinhu, ichigadzira yakasununguka uye inonakidza chiitiko chekushongedza.
Mukugadzirwa kwenzira inofamba ichibva kuimba yekumberi ichienda kubhokisi, dhizaini anonyatsobata mutinhimira wenzvimbo uye anorasa kushongedzwa kwakaomarara uye kwakanyanya. Akashandisa nzira dzakareruka uye dzakachena dzekugadzira kudzikamisa nzvimbo yemuchadenga, kunatsiridza nhanho dzemuchadenga, uye kuvaka zambuko rezvemanzwiro kutungamira vatengi muchikamu chakadzika cheJiangnan kuti vanzwe kunzwa kwakanaka kwe "musha murima".
Wese munhu anoti Jiangnan yakanaka, asi vashanyi vanobvuma chete kuti Jiangnan yakura.
Chidzitiro chesimbi ndicho chakanyanya kusiyanisa dhizaini mubhokisi nzvimbo, ichisimbisa matauriro ayo enzvimbo, ayo asingangogadzirise kubatana kwemutsara wekuona webhokisi, asiwo inovandudza pfungwa yetsika uye Jiangnan mamiriro ebhokisi. Iyo stencil yakasviba inogadzira kunzwa kwekusakosha uye inotambanudza iyo chaiyo mufananidzo zvisingaite kuratidza zvizere runako rweiyo inopfungaira Jiangnan.
Pane makamuri matatu epachivande pahuriri hwekutanga, hwakavakirwa pachivako chekutanga chevharanda chechivako, saka mugadziri akashandisa matanda erima kupedzisa kudzikamisa mhepo uye kusimbisa runako rwekare rwenzvimbo. Hosi yesimbi mesh uye kuyerera kwechiedza nemumvuri kunorerutsa pfungwa yemiganhu uye kuita kuti ruzivo rwepadenga rwakavanzwa asi ruchioneka, rwakajeka uye rwakajeka.
Embroidery, maruva neshiri, kupenda kweChinese uye zvimwe zvinhu zvakavanzwa zvine hungwaru muchadenga, kungave kusanzwisisika kana kukambaira, kuchideredza chimiro cheJiangnan uye kuchipfumisa chinoonekwa.
Paunotarisa pazviri, mweya wechokwadi weJiangnan unoratidzika kunge uri padyo, uye chidimbu cheutsi nemvura zvinoratidzika kunge zviripo. Pasi pekupinda kwakasviba, mifungo yese inokanganisa uye kunetseka zvinogona kupararira uye kudzoserwa murunyararo.
Nezve bhokisi riri pauriri hwechipiri, dhizaini akaenderera neiyo Jiangnan mamiriro zvichienderana nemaitiro azvino uno, achishandisa rakawanda remadziro uye siringi dhizaini kupa kusagadzikana kune iyo nzvimbo.
Iyo plamu inotumbuka pamadziro jira inogadzira iyo inodziya kunzwa kwe "plum pakutanga kweiyo diki pavilion, inomutsa kudzoka kweJiangnan". Mune iwo ruzivo, iyo dhizaini inogadzira mhando yechipiri yepasi makamuri epachivande akasiyana zvishoma kuburikidza neshanduko mumasileti nemarambi.
MaChinese tii seti, matafura nemacheya zvakawedzerwa mukamuri repachivande rakavanzika kuti vagadzikane uye vakashongedze mamiriro azere nerunako rwekare rweJiangnan, zvichiunza muridzi pfungwa yekunyaradzwa uye chiremerera che "kubudirira kunovhara nguva dzese, mamiriro ekunze ane hutsi uye mvura inononoka ”.
Rwiyo rwekutsamwa kweJiangnan mood, uye nhetembo newaini nepo makore ari madiki.
Musimboti wedenga chahwo hupenyu. Kubudikidza naDing Sheng Tang, izvo zvatinotaura kuvanhu hazvisi zvekugadzira dhizaini chete, asi zvakare tariro yekuti vanhu vanogona kudzokera kune kwavo kwechokwadi uye vanzwe kushamisika uye runako rwehupenyu vachikoshesa nekuona kunaka kwakashata kweJiangnan, kuti vakwanise bata makore akanaka uye gadzira mikana isingaite.
Art Kuongorora Chati
Zita rePurojekiti: Ding Sheng Tang Restaurant
Nzvimbo yePurojekiti: Wuxi, Jiangsu
Dhizaini Kambani: HapanaZone Space Dhizaina Hofisi
Mutungamiri Wekugadzira: Su Yang
Nyoro yekugadzira dhizaini: Cheng Zheng
Dhizaini nguva: 2020.07
Nguva yekupedzisa: 2021.01
Main zvinhu: huni ukanyatsotarisisa, rusvingo jira nezvakarukwa, simbi keteni
Mufananidzo: Xu Yisheng
Co-muvambi uye Dhizaina Dhizaina weNeZone Dhizaini
Vakapedza kudzidza kubva kuHunan University Chikoro cheMapurani, HapanaZone Dhizaini inoratidza hupfumi hwenzvimbo neyakareruka dhizaini dhizaini, inosimbisa kuendesa kweanoshamisa ruzivo uye kuchengetedzwa kwevanhu munzvimbo yemazuva ano, inosungira kukosha kumusanganiswa weapuratifomu uye nharaunda, inoremekedza hukama pakati pevanhu nenzvimbo , uye mabasa ake anogara achipa tsananguro nyowani kune yega yega chirongwa chine mufananidzo mutsva.
HapanaZone Dhizaini yakavambwa muna2016, uye vanobatirana vese vari post-85s, zvichiteerana kubva kuminda yezvivakwa, zvemukati dhizaini nehunyanzvi, uye parizvino vane mahofisi muShanghai / Wuxi. Chikwata chakakumikidzwa kutsvagurudzo yepakati yezviitiko zvevanhu, uye nepo maitiro epasirose eChina azere nemitengo yakachipa, inokurumidza uye yakawanda-inogadzirwa uye zvigadzirwa, HapanaZone Dhizaini inotarisira kuzvipira mukutsvagisa kwehunyanzvi uye ruzivo, kuratidza iyo pfungwa yehunhu dhizaini nemaonero matsva, uye kugadzira kusiyaniswa kwenzvimbo dhizaini.
Pakapfuura :: Kuzvidzora Uye Kushingairira, Kugadzira Iyo Yakapetwa-Yechipiri Yakakura Flat Pasi | Xia Chenglong Dhizaini Zvadaro: Iyo Yakazara Maitiro eSoft Furnishing Yakazara Projekiti, Inofinhwa neVashoma Vanhu!
2021 / 08 / 15 6325
2021 / 08 / 15 6111
2021 / 08 / 14 5825